Bilaogy Nizeriana: ny E-varotra, Nollywood… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2019 3:07 GMT
Manomboka ity herinandro ity miaraka amin'ny “Nizeria sy ny E-varotra: Mivazivazy mihitsy angamba isika” i Dabar Objects: Navoitrany ny olana amin'ny hahombiazan'i Nizeria amin'ny e-varotra. Notantarainy ny antony hiheverany fa na dia olona 5 tapitrisa aza no mampiasa finday ao amin'ny firenena, dia minitra vitsy monja no manao eVarotra ary ny ankamaroan'izy ireo dia ao Lagos, foibe ara-barotra lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Nanome soso-kevitra sasantsasany momba ny fomba hahazoan'ny isan-tokatrano solosaina any amin'ny trano tsirairay ihany koa izy.
Mbola miresaka momba ny teknolojia any Nizeria, Chippla mitatitra momba an'i Abuja, renivohitr'i Nizeria mampiasa onjam-pifandraisana. Ao amin'ny lahatsorany bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Abuja mampiasa onjampifandraisana (Wireless)” no nilazany hoe
“Ity no voalohany amin'ny karazany ao amin'ny tanàna Nizeriana hahomby sy sahaza ny fahefa-mividy raha ampitahaina amin'ny teknolojia aterineto ankehitriny ampiasaina manerana an'i Nizeria, izay, araka ny fenitra rehetra, dia tena lafo loatra”
Kazey Journal nametraka fanontaniana manan-danja momba ny fampandrosoana ara-teknolojika ao Nizeria. Manontany izy hoe “Afaka mividy Solosaina ve ny Nizeriana iray?” Miady hevitra mafy amin'ny zava-misy sy ny antontanisa izy ary mamintina fa afaka mividy solosaina tokoa ny Nizeriana. Nijery ny adihevitra ihany koa izy ary nanontany raha mahafantatra ny fomba fampiasana ny solosaina na ny antony hampiasaina solosaina ny Nizeriana saranga antonony? Taorian'ny lahatsoratra lava sy mandresy lahatra mikasika ny antony hiheverany fa afaka mividy solosaina ny Nizeriana, dia mamintina izany izy fa
“Eny, afaka mividy solosaina mora vidy ny Nizeriana saranga antonony, ary tsy tokony hamatsy vola tetikasa tahaka ny “Hetsika Solosaina ho an'ny Nizeriana Rehetra” ny governemanta, tokony handany ny famatsiam-bolany sy ny fanomezany amin'ny famoronana fotodrafitrasa tsara kokoa sy hamahana ny fahantrana izy ireo. Izany satria tsy mbola nisy hatramin'izay teo amin'ny tantara izany hoe Nizeriana saranga antonony nahazo tombontsoa mivantana avy amin'ny tetikasa nikendrena ny sarambambem-bahoaka, ary noho izany dia azo fintinina fa hitovy amin'ny teo aloha ihany ny hitranga amin'ny tetikasa tahaka izany”
Amin'ny lamaody maivana kokoa, miresaka momba ny Nollywood, indostrian'ny sarimihetsika Nizeriana i Aderemi's notebook. Mampahafantatra antsika izy fa mahazo 200 tapitrisa dolara isan-taona ny Nollywood, ka mahatonga azy ho fahatelo lehibe indrindra eran-tany, aorian'ny Hollywood sy Bollywood, mijery ny olana mahazo ny indostria izy. Hoy izy:
“Hipoka olona ny indostrian'ny sarimihetsika ao Nizeria. Nihena be ny kalitaon'ny horonantsary ary nanjary sangisangy, tsy dia saintsainina firy ny lohateny (oh: Pure Water, Area Scatter)”
“Mbola mitombo ihany anefa ny fangatahana, fa nahoana? Ireo lohahevitra miverimberina tahaka ny fitiavana, tantaram-pitiavana, ny tokam-po sy ny firaisankinan'ny fianakaviana hita amin'ny sarimihetsika no manintona ny vahoaka. Mahatsapa ihany ireo nizeriana ao anatin'izany fa mila mamantatra ireo lohateny mafàna kokoa izay mandrisika tinady.”
Nofintininy tamin'ny olana atrehiny amin'ny fandoavam-bola azo tamin-katsembohana mba hividianana ireo sarimihetsika ireo.
Chipla's blog nijery ny lahatsoratr'i Paul Salopek avy ao amin'ny Chicago Tribune momba ny mampiavaka ny Nollywood.
Manome antsika taratasy mahaliana hovakiana sy hapetraka ao am-paosy mandritra ny herinandro ny Naija Blog. Nitaraina tao amin'ny BBC izy mikasika ny tsy fandrakofana ny “Fanovana ao Nizeria”. Ny lahatsoratra, mitondra ny lohateny hoe “Ny BBC sy Nizeria” no valinteny azony avy amin'ny BBC. Raha manondro ny zavatra efa notaterin'ny BBC vao haingana momba an'i Nizeria ilay taratasy, dia nilaza bebe kokoa ny BBC hoe:
“Ho an'ny BBC midadasika kokoa, mamokatra tantara maherin'ny 200 izay nampidirina vao haingana ny fikarohana ao amin'ny tranokalam-baovaon'ny BBC amin'ny teny Nizeria ary manana drafitra izahay fa hankany Nizeria afaka volana vitsy ny ekipanay Newshour sy ny fandaharanay ara-pinoana mba handrakitra fandaharana.”
Vakiteny mahaliana tokoa
Black looks, amin'ireo lahatsoratra marobe efa nomaniny tamin'ity herinandro ity manana vakiteny mahaliana momba izay antsoiny hoe “Cheap Monkeys”. Ao amin'ny lahatsoratrany, mijery ny antony mahatonga ireo mpikaroka any Andrefana mampiasa an'i Afrika ho toy ny fototry ny fikarohana sy toerana fanandramana amin'ny asan'izy ireo izy. Fanamarihana goavana ny lohahevitra momba ny zon'ny biby izay mametraka zava-tsarotra ho an'ireo mpahay siansa any Andrefana amin'ny fampiasana biby ho fanandramana amin'ny asan'izy ireo. Ny tsy fisian'ny fanoherana sy ny sarany mora no nahatonga ireo mpahay siansa ireo haka an'i Afrika ho toerana fanaovana andrana amin'ny asan'izy ireo. Hoy izy
“ny tsy fisian'ny lalàna, ny tsy fisian'ny fanoherana amin'ny biby atao andrana ary ny sarany ambany any Afrika, no mandrisika ireo mpahay siansa tandrefana hiasa ao”
Oro manana tatitra be dia be momba ny diany tany India tamin'ny “South-South ICT-Enabled Traveling Workshop, India” izay mitatitra momba ny fivoriana iray mikasika ny fampiasana ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana (TIC) ao amin'ny tanàna iray ahitana mponina miisa 2500, nanoratra izy hoe:.
(Nomeny) “ohatra mikasika ny fomba nahafahan'ny mponina nampiasa fitaovana teknolojiam-baovao ho an'ny fikaroham-baovao, fanohanana ny fombam-pambolena sy ny fahazoana tolotra ara-pahasalamana (fisorohana, fizahana aretina, sns). Omena ny fiarahamonina amin'ny fitenin'izy ireo ny vaovao voarain'ireo vehivavy mpilatsaka an-tsitrapo.
Musings of a Naijaman maneho hevitra momba ny “fikasan'ny filoham-pirenena Nizeriana mba hanery ny fanovana ny lalàm-panorenana hiantoka fe-potoam-piasana fahatelo ho azy“, iza nitarika ho amin'ny fiaraha-mitantana sarotra tantanina, satria ahitana ireo kandidà te-ho filoham-pirenena, olona izay leo an'i Obasanjo, ireo mpanararaotra sy ireo Nizeriana sasany tena tia tanindrazana.”